भेन्टिलेटर अभाव हाम्रो लागि चुनौती हो : डा. बास्तोला « Pathibhara Post
भेन्टिलेटर अभाव हाम्रो लागि चुनौती हो : डा. बास्तोला
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले पछिल्लो समय काठमाडौंमा केही हदसम्म संक्रमण बढ्दै गएको बताएका छन् । उनकाअनुसार धेरै दीर्घरोगीहरुलाई पनि यो रोगले संक्रमण गरेको देखियो ।
आज शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग् कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ डा. बास्तोलासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
कोरोनाको संक्रमणको अवस्था के छ ? कोरोना संक्रमण भएको विरामीलाई अक्सिजनको अभाव छ कि छैन ?
अहिले संक्रमण काठमाडौँमा केही हदसम्म बढ्दै गयो । धेरै दीर्घरोगीहरूलाई पनि यो रोगले संक्रमण गरेको देखियो ।
तीमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई निमोनिया भएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने कारणले गर्दाखेरि अस्पतालमा आउनेहरूको संख्या बढ्न सुरु गरेको छ ।
यस सँगसँगै तराईबाट अक्सिजन आवश्यक पर्ने विरामीहरू रिफर भएर आउने अवस्था केही हप्ता अगाडिदेखि नै सुरु भईसकेको हो । निषेधाज्ञाभन्दा पहिलेको खुकुलो लकडाउनका कारण संक्रमितमध्ये केही व्यक्तिहरू सिकिस्त भएको अवस्था हो ।
अहिलेको अवस्थामा कस्तो किसिमको कदम चाल्दाखेरि डाक्टरहरूले उपचार गर्न सक्छन् ?
स्वास्थ्य सुरक्षा भनेको प्रथम कुरा भईहाल्यो । हामीसँग सिमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या छ । सहकार्यलाई एकदमै धेरै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मेडिकल कलेज, प्राइभेट जुन पहिलेदेखि नै स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गरेर आएका अस्पतालहरू छन्, सरकारी अस्पतालका नयाँ भवनहरू छन्, कोरोना उपचारका लागि हामीले यी सबैलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसमा सहकार्यको पनि त्यत्तिकै ठुलो आवश्यकता छ । पछि ५ प्रतिशतलाई मात्र भेन्टिलेटर चाहिन्छ । अहिले अक्सिजन र अस्पतालको व्यवस्थापन चुनौतीको कुरा हुनसक्छ ।
टेकु अस्पतालको कुरा गर्दा त्यहाँपनि अक्सिजनको अभाव भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ नि ?
अक्सिजन हामीसँग छ । भेन्टिलेटर ६ ओटा मात्र छ । भेन्टिलेटर अभाव हाम्रो लागि चुनौती हो । एकैपटक धेरै विरामीहरू त्यहाँ पुगे भने हामीलाई व्यवस्थापन गर्न एकदमै मुस्किल पर्छ । अहिले वीर अस्पताललाई अझै व्यवस्थित गर्ने काम आउँदा दिनहरूमा गर्नुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको रणनीति कत्तिको सफल भयो त, अब ?
अहिले सन्त्रासमा हामी बस्ने होइन । सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरूलाई हामीहरूले अपनाउन जरुरी छ । हेलचेक््रयाइँ नगरौँ, अनुशासित बनौँ । तीजमा पनि मास्क नलगाई नाचेको हामीले देख्यौँ । हामीले जति भने पनि अनुशासन पालना नभएको कारणले गर्दाखेरि यो संक्रमणको स्थिति हुँदैछ ।
तीजमा पाहुना नजानुस्, पाहुना नल्याउनुस् भन्दा भीडभाड गरेर भेला भएको देखियो । त्यसमा एकदम हेलचेक््रयाइँ गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, यो हाम्रो लागि एकदम राम्रो अवसर पनि हो ।
एउटा रोकथाममा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भने संक्रमितको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न र सुरक्षा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मैले देख्छु ।